ကလိုစေးထူး: နောက်ကျပြီး ကျတဲ့ နှင်း…
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:23 AM
နှင်းဟာ နှင်းပဲလေ..။ နှင်းဂုဏ်သတ္တိတော့ မပျောက်ဘူးထင်တယ်နော်။
ရာသီတွေရှိနေသ၍ နှင်းလဲ ရှိနေမှာပဲ မဟုတ်ဘူးလား..။
ရာသီကို ပြောင်းလို့မှမရနိုင်ပဲ။ လက်ခံရမှာပေါ့။
အချိန်မဟုတ်လို့ နှင်းကျရပါ့မလားဆိုပီး အပြစ်တင်လို့မှ မရတာ။ ဒါ သဘာဝရဲ့ ပြောင်းလဲမှူပဲလေ။
Apr 19, 2008, 9:12:00 AM
Snowing unlikely time is unique as I love snow...,
Your persuasiveness of written skills is awesome.
Love your posts...,
Apr 19, 2008, 10:06:00 AM
ခဏလေးတွေ ပါပဲ :P
Apr 19, 2008, 5:03:00 PM
နောက်ကျပေမဲ့လဲ သူ့တာဝန်သူကျေတဲ့ နှင်းပေါ့နော် ခဏတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာမြေကို အလှဆင်သွားတာက သက်ဆိုးရှည် ဒုက္ခပေးတဲ့ အရာတွေနဲ့ စာရင်တော့ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ ဒီသဘာဝတရားက တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်လေ
Thanksalot for your post with photo, my dear bro.
နှင်းကျတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိုက်တာပေါ့။
မြတ်နိုးတော့ နှင်းကို ကြိုက်တယ်..ဟီး.
နောက်ကျပီးကျတဲ့ နှင်း တဲ့..။ အချိန်မဟုတ်ပဲ ကျတဲ့နှင်း ပါ..။
အစက လဲ နှင်းကျတယ်ဆို.။
ဆရာကို ဆရာလုပ်တာ။ ဆောရီးပါနော်။
Apr 20, 2008, 3:55:00 AM
လူတွေက ဖောက်ပြန်တော့ ရာသီဥတုတွေလဲ ဖောက်ပြန်တာ ...
ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေ များနေသရွေ့တော့ ... ဒီလိုပဲ ဖြစ်နေဦးမှာပဲ .... ။
ကိုစေးထူးရဲ့ ရေးသားချက်တွေကတော့ဗျာ. ကျနေတဲ့ နှင်းလေးတွေကိုတောင် ကြွေချင်သလိုလိုဖြစ်သွားတယ်....
although i love snow,i've no chance to watch and see snow. I love ur post....
Apr 20, 2008, 9:17:00 PM
လေးဖြူကတောင် “ ခဏလေးများ ” တဲ့
Apr 20, 2008, 9:18:00 PM
ုကိုစေးထူးရေ...နှင်းတွေကြားထဲ လွမ်းရိပ်တွေဝေလို့။ တန်ဖိုးဖြတ်မှူတွေက မြတ်နိုးမှူအတိုင်းအတာပေါ် မူတည်မလားပဲ။ နှင်းကို မြတ်နိုးတတ်သူအဖို့ အချိန်ကာလက ဘယ်မှာ အရေးကြီးတော့မလဲနော်။ အဲဒီနှင်းအစစ်လေးတွေကို နှင်းအတုတွေနဲ့ကျေနပ်နေရတဲ့ ဒီအရပ်ခဏအလည်ခေါ်ချင်ပါရဲ့။
Apr 21, 2008, 4:55:00 AM
Apr 22, 2008, 6:31:00 PM